Fiainana mpanakanto :: Miresaka ny momba azy i Onja Tinondia : ny fitaizana sy ny mozika • AoRaha
Fiainana mpanakanto Miresaka ny momba azy i Onja Tinondia : ny fitaizana sy ny mozika
Nahazo fahasoavana lehibe I Nofisoa Onjafarae Pascale, fantatry ny rehetra amin’ny anarana maha mpanakanto hoe: Onja Tinondia, tamin’ ny volana avrily lasa teo. Teraka kambana mirahalahy izy. Mitantara ny niainany an’izany fahasoavana izany ity renim-pianakaviana mpihira ity. Noresahiny koa ny fahasarotana nandalovany tamin’ny fotoana nitondrany vohoka.
Mpanakanto manana ny maha izy azy eo amin’ny sehatry ny mozika mafana i Nofisoa Onjafarae Pascale na i Onja Tinondia. Manaitra ny kanto ataony ary tsy izany ihany fa isan’ny manintona aminy ihany koa ny fihaingony. Raha ny fitiavany mikolo ny fianjaikany dia tsy miafina amin’ny rehetra mihitsy, na any anatin’ireo rakitsary vokariny na eny an-tsehatra, mandritra ireo seho atolony. Saika mampihetsiketsika avokoa ny hirany ka maro ireo tsy afaka am-bavan’ny mpankafy. Tao anivon’ny tarika Tinondia, izay niarahany tamin’ireo iray tampo aminy, no tena nahafantaran’ny rehetra azy. Nanapa-kevitra ny hikopak’elatra irery izy ny taona 2009. Voarain’ny sofin’ny mpankafy avy hatrany ny mozika nataony. Izy ihany no mamorona ireo hirany. Natomboka tamin’ny rakikira « Tambitamby » ny filalaovany mozika irery. Folo taona aty aoriana, eo am-panomanana ny rakikirany fahatelo izy.
Efa renim-pianakaviana koa i Onja Tinondia, amin’ izao fotoana izao. Eo ny fankafizany sy fahaizany mihira sy mandihy kanefa tsy nataon’ity andriambavilanitra ity ambanin-javatra koa ny maha renim-pianakaviana azy. Nohamafisiny fa mila fitandremana hatrany ny fiainam-pianakaviana mba tsy hifangaro amin’ny maha mpanakanto. Ho azy, ilaina ihany koa ny fananana taranaka satria io no hery manosika azy hihoitra amin’ny fiainana sy hanatsara ny kanto voiziny.
Roa taona taorian’ny niterahany an’i Nofisoa Fortuné Mehdi , zanany lahimatoa, dia nahazo kambana roa lahy kely indray i Onja Tinondia. Tamin’ny volana avrily lasa teo, an-katoky ny fetin’ny Paska, no nahaterahan’ireo vahiny keliny ireo. Telo mirahalahy ny zanak’i Onja, ankehitriny. Tsy tia sehoseho ity renim-pianakaviana ity fa ezahiny hatrany ny hanavaka ny fiainam-pianakaviana sy ny maha mpanakanto azy.
« Na dia mila fitandremana be aza ny fiainana amin’ny maha mpanakanto, tsy azo ihodivirana amin’ny maha vehivavy ny tena ny fananana taranaka. Tsy tokony ho sakana velively ny hoe satria mpihira dia tsy tokony hiteraka », hoy izy raha nilaza ny safidiny manokana hanana fiainana toy ny vehivavy rehetra.
« Faly sahirana aho teo am-pitondrana vohoka », hoy ity mpanakanto ity. Tanteraka ny nofinofy hanana zazakely hafa indray saingy sahirana kosa fa hampiato kely ny mozika izay ankafiziny sy efa asany koa. Rehefa mitondra vohoka moa dia matetika no betsaka ny zavatra tsy zakan’ny vehivavy. Tsy nanakana azy hamokatra zavakanto anefa izany.
« Naka aina kely aho satria somary nanahirana ny fitondrana azy mirahalahy kambana. Tsy nitovy tamin’ilay iray voalohany. Tsy afaka nivezivezy na nampiasa vatana loatra, mila fitandremana be izay natao rehetra. Na izany aza, tsy hoe niala tamin’ny sehatry ny kanto akory fa sady mikarakara ny zaza ihany no mamorona ho an’ny mpankafy», hoy i Onja.
Raha tsiahivina, tamin’ny volana desambra tamin’ny taon-dasa, nandritra ny fampielezan-kevitra ho amin’ny fifdidianana filoham-pirenena, no niakarany an-tsehatra farany.
Fanirian’ity vehivavy mangafeo avy any amin’ny faritra Atsimo ity, efa hatramin’ny ela ny hiaina fahasambarana amin’ny maha renim-pianakaviana. « Nahatsiaro banga aho fony mbola tsy manan-janaka. Inona tokoa moa no hiasana sy hamoronana raha toa ka tsy mba hisy taranaka hijinja izay nafafinao,» hoy izy. Nataony hery ny fananana zanaka hahafahany mamokatra kanto tsara kokoa.
«Na dia maro aza ireo milaza fa tsy tokony hiteraka ny mpanakanto dia tsapako fa tena manana hasambarana tsy manam-paharoa aho. Raha afaka nandroso hevitra aho dia hoy aho hoe tena tokony hiteraka tokoa ny mpanakanto hahafahany mahatsapa hoe toy ny ahoana marina izany tena vehivavy izany? Izany ray aman-dreny izany? Amiko, tsy hampiova ny fankafizan’ny olona ahy ny hoe niteraka raha toa ka mitazona ny maha izaho ahy aho», hoy hatrany izy.
Fampisehoana sy fitaizana
Mamoron-kira hatrany i Onja Tinondia. Tsy ho ela dia hasehony ny mpankafy azy izany. « Afaka volana vitsy monja dia afaka hankafy ireo mozikako indray ny rehetra. Efa manomana zava-baovao aho ary tsy ho ambakan’ireo izay efa nataoko hatramin’ izay» hoy hatrany ity mpanakanto ity. Efa miomana any amin’ny fampivadiana ny fiakarana an-tsehatra sy ny fitaizana dieny izao rahateo izy.
Manana fandaharanasa maty paika izy ny amin’ny hisahanany ireo zanany kely roa lahy rehefa tonga ny fotoana hanolorana seho. Aminy koa tsy maintsy omena fahafam-po hatrany ny mpankafy izay efa nanaraka azy hatramin’izay. « Mampanantena ny mpankafy aho fa hamoaka mozika miavaka hatrany. Zava-baovao sy zava-tsoa no efa nomaniko », hoy i Onja. Andriambavilanitra tsy misaraka amin’ny fikolokoloana ny endrika amam-bika i Onja na efa renim-pianakaviana aza. Hita taratra izany tamin’ny nananany ny zanany voalohany ary hihamafy amin’ireto zanany faharoa ireto. Mbola hotazoniny foana ilay toe-batany manifinify sy ny fihetsiny ary ny dihy ataony rehefa miantsehatra. « Tsy hisy hiova ny fihetsika eny ambony sehatra , ny fiakanjo kosa no somary hifanaraka amin’ny maha reny », hoy ity mpanakanto.
Dome Rta Ankorondrano :: Efa vonona hihaona amin’ireo mpankafy i Rass